ဓာတ်ပုံကြည့်ရန် ဓာတ်ပုံကြည့်ရန် မှထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊
ပုံစံ - Lovely Couple
”နှစ်ပေါင်းများစွာအကြာတွင်အနာဂတ်၌တည်၏,ငါတို့နေမကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်.အရင်ကလိုကမ္ဘာကိုမသွားနိုင်ရင်တောင်,ငါတို့အချင်းချင်းသတိရနေ ဦး မှာပဲ’အနံ့,အပူချိန်,ပွေ့ဖက်,ခုန်,ငါတို့အိပ်မက်ကိုမြင်မက်ပြီ,ထို့နောက်ဤသည်ရေးသားခဲ့သည်သောဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်.&ကဗျာ;
မည်သူမျှထာဝရမည်မျှဝေးကြောင်းမည်သူမျှမဖြေနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်,ဒါကြောင့်ငါတလျှောက်ရတဲ့အမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှအခိုက်မြတ်နိုး.အနာဂတ်၌မိနစ်တိုင်းနိုင်ပါစေ,ကျနော်တို့တစ် ဦး ချင်းစီကတခြားအပေါ်နိုင်ပါတယ်’အတူတူပိုကောင်းလာအောင်ကြိုးစားပါ.အနာဂတ်၌တိုင်းစက္ကန့်တိုင်းနိုင်ပါစေ,ငါတို့တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်နေလို့ရတယ်’အချိန်နှင့်ဖြည်းဖြည်းချင်းပြောင်းလဲပစ်.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.designwatches.com.tw/my/couple-photo-watch.html
ကျနော်တို့ကနာမည်နှစ်ပေါင်း 40 ကျော်အဘို့အ sucessful များမှာ Taiwan အတွက်ထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့ ဓာတ်ပုံကြည့်ရန်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုဆက်တိုက်ဘို့ပြီးပြည့်စုံသောစက်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အတူကြေငြာလွှာသည်, သင့်အားအထူးလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်အပြိုင်အဆိုင်စျေးအရည်အသွေးမှီထုတ်ကုန်, သို့မဟုတ်အပြည့်အဝကိုက်ညီကေဘယ်ကြိုးရှာကြ quality.Whether အတွက် Over-အားလုံးထိန်းချုပ်မှုပေးနိုင်ပါသည်ကျနော်တို့ကမ်းလှမ်းချက်ကိုရန်ဒီမှာအမြဲရှိတယ် ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုရယူနှင့်ငါတို့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်နားလည်မှုကိုအရှိန်မြှင့်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ website သွားရောက်ကြည့်ရှုရန်အကောင်းဆုံး service.Welcome နှင့်အတူအရည်အသွေးမြင့်မား cable ကို။
စိတ်ကြိုက် Photo Watch
ကျနော်တို့အတူတူလမ်းလျှောက်သောထိုနေ့ရက်ကာလအကြောင်းပြချက်နှင့်အဝိဇ္ဇာအကြား,ငါတို့ကပိုရင့်ကျက်တယ်.အချိန်ကုန်သွားရင်တောင်,တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အရေးကြီးတဲ့နေရာတစ်ခုအမြဲရှိနေတယ်ဆိုတာငါတို့အားလုံးသိတယ်’နှလုံးသားတွေ. ဟေးပျားရည်,ငါမင်းကိုပြောစရာရှိတယ်:သင်၏အနားမှာအနားမှာရပ်နေ,ငါအချိန်အာရုံစိုက်ဘူး.အခုချိန်အထိ,ကျနော်တို့အချိန်ကြာမြင့်စွာလမ်းလျှောက်ခဲ့ကြသဘောပေါက်လာတယ်.ကျွန်ုပ်တို့ပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ဆုံခြင်းကိုသတိရပါ?ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချစ်စရာနည်းနည်းရန်ပွဲကိုသတိရပါ?ငါချစ်မြတ်နိုးပြီးစိတ်ဓာတ်ကျခဲ့တဲ့နေ့ရက်တွေကိုမှတ်မိသေးလား?သငျသညျအရုပ်ဆိုးဖြစ်ခြင်းနှင့်သင်ရယ်မောဘို့ငါ့ကိုမုန်းပါလိမ့်မယ်?ကျနော်တို့တစ် ဦး ချင်းစီကတခြားပါဝင်ခဲ့’သေးငယ်တဲ့အရာတွေ,တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ငိုပြီးရယ်မောကြတယ်,ဒါပေမယ့်ငါတို့အတူတူဖြစ်နိုင်သည်ကိုမေ့လျော့,ဤသည်ငိုကြွေးမြည်တမ်းခြင်းနှင့်ထိုက်တန်သောအရာဖြစ်သည်.သင်၏ကုမ္ပဏီနှင့်အလုပ်လုပ်ခြင်း,ငါအရှုံးတိုင်း,ဒီစိုးရိမ်မှုတွေကိုငါမေ့ပြီးစစ်မှန်သောမိမိကိုယ်ကိုရှာနိုင်သည်. အခု,ကျွန်ုပ်သည်အတိတ်နှင့်အနာဂတ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရသည့်အကောင်းဆုံးပုံပန်းသဏ္andာန်နှင့်အကောင်းဆုံးဖော်ပြပုံကိုမှတ်တမ်းတင်လိုပါသည်.မင်းဟာငါ့ဘဝမှာအသိမ်မွေ့ဆုံးနဲ့အလှဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ပါ.သင်၏ကုမ္ပဏီအတွက်အမြဲတမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်.ကျေးဇူးပြုပြီးနောက်မှပြောပြပါ. စိတ်ကြိုက်နာရီကိုထောက်ပံ့ပါ:နာရီအားလုံးစီးရီးစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်
အကောင်းဆုံး ဓာတ်ပုံကြည့်ရန် ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက် ဓာတ်ပုံကြည့်ရန် ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူနှင့်ဖြန့်ဖြူးသူ ဓာတ်ပုံကြည့်ရန် ကိုရှာဖွေရန်နှင့်ဝယ်ယူရန်အတွက်၊ Taiwan
မိသားစုသည်ဘ ၀ တွင်နွေးထွေးဆုံးရင်းနှီးမှုဖြစ်သည်,သင်၏မိသားစုမှနွေးထွေးစွာနှုတ်ခွန်းဆက်စကားကိုသင်လိုအပ်သည့်အခါတိုင်းအမြဲတမ်းတွေ့ရလိမ့်မည်. ”ဒါဟာ’အအေးမိ,အဝတ်အထည်များထပ်ထည့်ပါ,နှင့်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်နွေးစောင့်ရှောက်လော့.” ”ဘယ်လောက်ပဲအလုပ်များနေပါစေ,ထုံးစံအတိုင်းစားသင့်တယ်.”သင်အိမ်နှင့်ဝေးသည့်အခါ,ထိုသို့သောသတိပေးချက်များကိုသင်မကြာခဏခံရလိမ့်မည်.စကားလုံးတိုင်းနှင့်စကားလုံးတိုင်းသည်သင်၏မိသားစုသည်သင်၏ထာဝရထောက်ပံ့မှုဖြစ်သည်ဟုဖော်ပြသည်.ယခင်တုန်းက,ငါအိမ်မှာအခါ,ငါ့မိသားစုကိုငါအမြဲခံစားရတယ်&တောင်ကြီးမြို့;s ကိုညွှန်ကြားချက် nagging ခဲ့ကြသည်,ပြီးတော့ငါ didn&တောင်ကြီးမြို့;ငါအိမ်မှမထွက်မချင်းဤကဲ့သို့သောနေ့စဉ်ဘဝနှင့်အိမ်၏နွေးထွေးမှုကိုလက်လွတ်မပျောက်ပါစေနှင့်. ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ကကြီးပြင်းလာခြင်းဖြစ်သည်,မိသားစု ၀ င်များ၏စိုးရိမ်မှုကိုနားလည်ပြီးသူတို့၏အရိုးရှင်းဆုံးဆန္ဒကိုနားလည်နိုင်သည်,ငါတို့ကျန်းမာသန်စွမ်းမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်;သို့မဟုတ်ပါကပျောက်ဆုံးနေသည်,ဤညွှန်ကြားချက်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏နှလုံးသား၌အသက်ရှင်ပါစေ.မမြင်ရတဲ့၌တည်၏,မိသားစု ၀ င်တွေအတွက်စိုးရိမ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့လည်းသင်ယူခဲ့တယ်,မိသားစု ၀ င်များအကြားရှိချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုမည်သည့်အရာဖြင့် အစားထိုး၍ မရနိုင်ကြောင်းနားလည်ထားပါ.လက်ပတ်နာရီပေါ်တွင်ထွင်းထားသောမေတ္တာကဲ့သို့,ဒါကြောင့်ထိန်းသိမ်းထားခြင်းနှင့်မြတ်နိုးနိုင်ပါသည်.အချိန်တိုင်းအချိန်နှင့်အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ပြီးနေ့စဉ်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူလိုက်ပါ. ငါတို့ကိုချစ်တယ်ဆိုတာသတိရပါ,ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုဖော်ပြရန်သတိရရန်လည်းသတိပေးသည်. ဘယ်အချိန်မှာဘယ်မှာမကိစ္စ,ငါတို့မိသားစု&တောင်ကြီးမြို့;ငါတို့ကိုချစ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ ၌အမြဲတည်ရှိလိမ့်မည် စိတ်ကြိုက်နာရီကိုထောက်ပံ့ပါ:နာရီအားလုံးစီးရီးစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်
၎င်းသည်ဟန်ထက် ပို၍ ကြာသောစိတ်ခံစားမှု၏ဆိုလိုရင်းကိုနားလည်ရန်ဖြစ်သည်’ချစ်ခင်မှု.၎င်းသည် Haruki Murakami ကိုကမ္ဘာကြီးသည်အမြဲတမ်းအအေးနှင့်အအေးမဟုတ်ကြောင်းနားလည်ရန်ခွင့်ပြုသည်,ဒါပေမယ့်လည်းလှပနူးညံ့သိမ်မွေ့နိုင်ပါတယ်.၎င်းသည်လေးပေရှိသောမိသားစုဖြစ်သည်,ဆံပင်အပြည့်အဝနှင့်အတူရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေတစ်,အမြဲတမ်းတမင်တကာနှင့်ကောင်းမွန်သောအဖော်-ပြုမူခဲ့သည်.ဒါဟာလူမျိုးရေးအတားအဆီးတွေကိုဖြတ်ပြီးကျွန်တော့်ဘဝကိုမဆင်မခြင်ချိုးဖောက်ခဲ့တယ်,ဒါမှမဟုတ်အဲဒါကကျွန်တော့်ဘဝကိုဝင်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်.ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အချင်းချင်းကိုယုံကြည်ပြီးကူညီပေးသည့်ကောင်းသောမိတ်ဖက်များဖြစ်သည်,ပြီးတော့ဘဝမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါတိုင်ကြားမယ်.ငါ Don’အဲဒါကိုနားလည်နိုင်မယ်ဆိုရင် t ကိုငါသိ၏,ဒါပေမယ့်အမြဲတမ်းရှည်လျားသောခေါင်းကိုထုတ်တံတွေးထွေးပါလိမ့်မယ်,၎င်း၏အမြီး wagging,ငါညည်းညူပြီးသည်နှင့်၎င်း၏၎င်း၏ fluffy ခန္ဓာကိုယ်နှင့်အတူငါ့ကို pounce.ဒါမှမဟုတ်အေးအေးဆေးဆေးမျက်စိနဲ့ငါ့ကိုကြည့်,ငါ၏ပခုံးသေးငယ်တဲ့ရက်ကက်နှင့်အတူ pat,ဒီရေကျချိန်တွင်ကျွေးပါ၊ နွေးသောကြက်သားဟင်းရည်တစ်ခွက်ကိုသောက်ပါ.အဲဒီလိုပဲ-ပျော်ရွှင်သောအခိုက်အတန့်ဟုခေါ်တွင်သည်၎င်း၏ဘောလုံးသည်ပျော့ပျောင်း။ ဆံပင်ကဲ့သို့ချောမွေ့နိုင်သည်.နူးညံ့သောအဖော်,သစ္စာစောင့်သိစိတ်,သင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရဖော်ပြရန်သင့်အားဖိတ်ခေါ်ပါသည်. စိတ်ကြိုက်နာရီကိုထောက်ပံ့ပါ:နာရီအားလုံးစီးရီးစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်